सूचना प्रबिधि | गणेश कार्कीको ब्लग
बन्दको अध्यारो इन्टरनेटमा पनि
Posted on April 10, 2011 by नेपाली मुटु
नेपालमा प्राविधिक गडबडि बाहेकको समयमा इन्टरनेट सेवा बन्द भएको हिजो सम्म एउटा मात्र इतिहास थियो । तर आज देखि त्यो रहेन । आफ्नो माग पुरा गर्न बन्द आवहान गर्ने कुचलन अब इन्टरनेटमा पनि सुरु भयो । आफु अथवा आफ्नो संगठनमा अन्याय भएको भन्दै एउटा संगठनले आज दिनको १ देखि २ बजे सम्म इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो । एडिएसएल देखि बाहेकका इन्टरनेट बन्द गरेको त्यो संगठनले भोली देखि बन्दको समय बढाउँदै लैजाने सगर्व घोषणा गरेको छ । त्यो बन्दको समयमा तपाईले पनि इन्टरनेट चलाउँनु भएको थियो भने तपाईले खोल्न चाहनु भएको साइट नखुली यस्तो सन्देश आएको हुनु पर्छ ।(तस्विरमा हेर्नुहोस् ।)
नेपालको अन्तरिम संविधानमा इन्टरनेट, टेलिफोन, रेडियो, टेलिभिजन केहि पनि बन्द गर्न नपाईने व्यवश्था गरिएको छ । यसरी गैरसंवैधानिक रुपमा बन्द गर्ने संगठन हो, आइएसपीहरुको संगठन इस्पान । उसले कलवाइपास लगायतका गैरकानुनी काममा बिना प्रमाण आरोपको भरमा व्यावसायीलाई कारवाही गरेको भन्दै विरोध जनाएको बताएको छ । (हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ती ।)
ठिक छ, उनीहरु मारमा परेका होलान् । यो कानुनी उपचारको कुरा हो । यसका लागि कानुनले तय गरेका विकल्पहरु छन् । तर एक्कासी अन्याय भयो भन्दैमा गरिएको बन्दले हामी उपभोक्तालाई चै के न्याय गरेको छ त ? उनीहरु कै दावी अनुसार उनीहरु अन्यायमा परेका पनि होलान्। तर के त्यसो भन्दैमा इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवालाई गैर संवैधानिक रुपमा बन्द गरी विरोधमा उत्रन पाइन्छ ? के इन्टरनेट भनेको तरकारी पसल वा चिया बेच्ने पसल जस्तो हो र- मन लागे बन्द गर्ने, मन नलागे खोल्ने ? दुनियाँमा कतै नहुने इन्टरनेटै बन्द गरी विरोधमा उत्रने यस्तो अनौठो सल्लाह आइएसपीहरुको संगठन आइस्पानलाई कसले दियो ? जसले जे सल्लाह दिए पनि लागू गर्ने पदाधिकारी कस्ता ?
यो संविधानले व्यवस्था गरेको सूचनाको अधिकारको हनन् हो। यो लाखौँ उपभोक्ताहरुलाई व्यवसायीले देखाएको चरम गैरजिम्मेवारीपनाको नमूना हो। पानी, विद्युत र टेलिफोन सेवा जस्तै इन्टरनेट सेवा भनेको पनि अत्यावश्यक सेवा हो भन्ने यी व्यवसायीहरुले कहिले बुझ्ने ?
यदि इन्टरनेट साहुहरुले विरोध गर्न सक्छन् भने हामी इन्टरनेट उपभोक्ता पनि त्यसको विरोध गर्न सक्छौँ, आउनुस् इन्टरनेट साहुहरुले गरेको हाम्रो सूचनाको अधिकारको हननको विरोध गरौँ। पठाउनुस् विरोध इन्टरनेट साहुहरुको संगठनको इमेलमा info@ispan.net.np अथवा आइस्पानका निम्न पदाधिकारीलाई विरोध इमेल लेखौँ-
Mr. Binay Bohra
Vianet Comunictaions Pvt. Ltd
Mr. Pawan Pradhan
Mitra Network Private Limited
Mr. Deepak Shrestha
Subisu Cable Network Pvt. Ltd.
अथवा फोन गरौँ 5530313 वा फ्याक्स गरौँ 5520131 मा। यदि आज हामी चुप बस्यौँ भने भोलि कुनै पनि बहानामा यिनीहरुले पूरै इन्टरनेटलाई आफ्नो कब्जामा लिनेछन्।
उनीहरुको घोषणा उनीहरुकै भाषामा यहाँ हेरौं (click)
Filed under: नोट अफ डिसेन्ट, समाचार विश्लेषण, सूचना प्रबिधि |	3 Comments »
लोकतन्त्र कालो हुन्छ/विश्वलाई जित्ने नेपाली भिडियो (भिडियो सहित)
Posted on June 22, 2010 by नेपाली मुटु
अमेरिकी सरकारले आयोजना गरेको विश्वव्यापी डेमोक्रेसी भिडियो च्यालेन्ज प्रतियोगितामा नेपालका एक युवा विजेता बनेका छन् । काभ्रेको महादेवस्थान गाविसका २० वर्षिय अनुप पौडेल बिजेता बनेका हुन् । उनले ‘डेमोक्रेसी इज ब्ल्याक’ नामक वृत्तचित्र बनाएर प्रतियोगितामा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतियोगितामा विश्वका ८९ देशका २ हजार २ सय प्रतिस्पर्धीको सहभागीता रहेको थियो । भिडियो मार्फत डेमोक्रेसीको परिभाषा उल्लेख गर्नुपर्ने उक्त प्रतियोगीतामा उनले १ मिनेट ३० सेकेन्डको भिडियो क्लिप तयार पारेका थिए । उनले चारवटा फरकफरक रङ्गहरुको मिश्रण गरी डेमोक्रेसीलाई परिभाषित गरेका थिए । डेमोक्रेसी भनेको एकता, स्वतन्त्रता, शान्ति र मायालाई उनले परिभाषित गरेका थिए । मैले बनाएको भिडियो उत्कृष्ट भएकोमा साह्रै खुशी लागेको छ’ उनले भने ‘यो मेरो मात्र बिजय नभई नेपालको समेत बिजय हो ।’
उनले उक्त प्रतियोगितामा बिजय भई नेपाली पनि कुनै कुरामा कमजोर हुँदैनन् भन्ने कुरा देखाउन सके । बिजेता बनेपछि उनी अफ आफ्नो भिडियो देखाउनका लागि अमेरिकाको न्यूवर्क लगायतका क्षेत्रमा जाने अवसर पाउनेछन् । उनको उक्त भिडियो त्यहाँका चलचित्र भवनहरुमा समेत देखाइने उनले बताए । ओस्कार कलेज अप फिल्म स्टडिजमा स्नातक तहमा अध्ययन गदै गरेका पौडेल एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले फिलिपिन्समा आयोजना गरेको जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी भिडियो प्रतियोगितामा प्रथम भएका थिए ।
विश्व विजेता बन्न पौडेल सफल भएपछि उनको गाउँ महादेवस्थानमा खुशीयाली छाएको छ । कुन बेला अनुप गाउँमा आउँलान र पुष्पहार सहित अविरले रङ्गाउन पाईने हो भन्ने आशामा स्थानीय बासी रहेका छन । ‘अनुप विश्व विजेता बनेपछि हामी धेरै खुशी भएका छौ’ स्थानीय राजन पौडेलले भने ‘यो हाम्रो गाउँ, जिल्ला र देशकै लागि गौरवको कुरा हो ।’
अनुपको विश्वविजेता भिडियो हेर्नुहोस्:
Filed under: सूचना प्रबिधि |	Leaveacomment »
Posted on May 14, 2010 by नेपाली मुटु
सामाजिक सञ्जालको लोकप्रिय साइट फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुको व्यक्तिगत विचार उनीहरुको अनुमति बिना अरु वेबसाइटहरुले पनि प्रकाशन गर्न पाउने सुविधा थप्न लागेको छ। यसले गोपनीयताको अधिकार हनन् हुने भन्दै फेसबुकविरुद्ध आलोचना गर्नेहरु खनिन थालेका छन्। फेसबुकले बिहीबार यो विषयमा छलफल गर्न आफ्ना कर्मचारीहरुको आन्तरिक बैठक डाकेको थियो। फेसबुकले यो सुविधा थप्यो भने यसका ४० करोड प्रयोगकर्ताहरुको भित्री कुरा थाहा पाउन सकिनेछ र यसले थप विज्ञापन पनि आकर्षित गर्न सक्नेछ। अनलाइन विज्ञापनमा अग्र स्थानमा रहेको गुगललाई पनि यसले उछिन्ने अनुमान छ। अमेरिकाका चार जना सिनेटरहरुले यसमा चासो राख्दै फेसबुकलाई आफ्ना नीति परिवर्तन गरी प्रयोगकर्ताहरुको जानकारी गोपनीय नै राख्‍न र प्रयोगकर्ताहरु आफैले चाहे मात्र उनीहरुको स्वीकृतिमा अरुलाई बाँड्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन्।
न्युयोर्क विश्वविद्यालयका चार जना विद्यार्थीले त फेसबुकको कदमबाट क्रुद्ध भएर यसको विकल्पका रुपमा अर्को साइट बनाउन एक लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी संकलन गरिसकेका छन्। एक न्यु मिडिया मार्केटिङविज्ञले जुन महिनाको ६ तारिखका लागि अनलाइन विरोध गर्ने योजना बनाएका छन्। उनको यो कदमलाई बिहीबार मध्याह्नसम्ममा ६३२ जनाले साथ दिएका छन्। फेसबुक प्ल्याटफर्मका निर्देशक ब्रेट टेलर भन्छन्- हामी यो विषयमा संवेदनशील छौँ र यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ। उनले फेसबुकले फिचर्सहरु र गोपनीयतासम्बन्धी सेटिङहरु थप्न लागेको बताए। यो प्रयोगकर्ताहरुका लागि जटिल हुने उनले स्वीकारे तर नयाँ नयाँ फिचर्सहरुको परीक्षण सदस्यहरुलाई गर्न लगाउने र उनीहरुको अनुभव लिने क्रम जारी रहने उनको कथन थियो।
फेसबुकले अहिले भइरहेको आलोचनाहरुलाई त्यति वास्ता गर्ने संकेत देखाएको छैन। यो पहिलेका विरोधहरुभन्दा कमजोर पनि छ, फेसबुकले बतायो। फेसबुकले सामान्य लेआउट मात्रै परिवर्तन गर्दा पनि त्यसको विरोधमा २० लाख प्रयोगकर्ता जुटेका थिए।
फेसबुकले यो नयाँ फिचर्स अप्रिल महिनाको अन्तिममा थपेको थियो र यसले एक करोड सदस्यलाई यसमा राखिसकेको छ। पुराना प्रयोगकर्ताहरुलाई यो फिचर्समा हालसम्म जोडिएको छैन।
फेसबुकका करोडौँ प्रयोगकर्ताहरुको भीडमा अल्पमतमा परेका केही भने फेसबुकले प्रयोगकर्ताहरुलाई धोका दिएको भन्दै चित्त दुखाइरहेका छन्। गैरनाफामुखी संस्था सेफ इन्टरनेट अलायन्सकी अध्यक्ष लिन्डा क्रिडल भन्छिन्- ग्राहकहरुलाई एउटा कुरा सुनाएर सदस्य बनाउने, अनि आफ्ना नीतिलाई परिवर्तन गर्ने, यसमा हाम्रो आपत्ति छ। उनी गोपनीयता सम्बन्धी सेटिङहरु फेसबुकमा दर्ता हुँदा नै प्रयोगकर्ताहरुलाई सरल ढंगले बुझाउनु पर्ने सुझाव दिन्छिन्।
बिहीबारै फेसबुकले स्पाम र अरु आक्रमणहरुसँग जुध्न नयाँ सुरक्षा सुविधाको घोषणा गरेको छ। यसले तपाईँले फेसबुक लग इन गर्न अक्सर प्रयोग गर्ने उपकरणहरु (कम्प्युटर, मोबाइल) लाई अनुमति प्रदान गर्ने सुविधा दिन्छ। यदि तपाईँले अनुमति नदिएको उपकरणको प्रयोग गरी तपाईँको खातामा लग इन गर्न खोजे तपाईँलाई यसले सूचना दिनेछ। (स्रोतः युएसएटुडे)
Filed under: समाचार विश्लेषण, सूचना प्रबिधि |	Leaveacomment »
Posted on May 11, 2010 by नेपाली मुटु
गौतम बुद्ध कहाँ जन्मिएका हुन् भनेर कसैले तपाईलाई सोधे तपाई के भन्नुहुन्छ ? पक्कै नेपाल भन्दा अर्काे ठाउँ तपाइ सोच्न पनि सक्नुहुन्न । तर भारतिय कुप्रचारले गर्दा संसारका धेरै मानिसहरु बौद्ध धर्मालम्बी समेत भारत नै गौतम बुद्धको जन्मस्थान हो भन्ने गर्छन् । पुर्ण जानकारी नलिकन हचुवाको भरमा विश्वका प्रसिद्ध लेखक तथा संस्थाहरुले पनि भारत नै बुद्धको जन्मस्थान भनेर प्रचार गरिदिएका कारण संसार भर नै यो गलत कुराले अधिपत्य जमाएको थियो । यसैको कारण विश्व प्रसिद्ध इन्टरनेट सर्च इञ्जिन गुगल (google) ले केहि समय अगाडि सम्म गौतम बुद्धको जन्म स्थान भनेर भारतको कुनै स्थान देखाउँने गरेको थियो । तर अब यो एउटा गलत इतिहास मात्र भएको छ । यो गल्तिलाई गुगलले सुधारेको छ । अहिले गुगलको नक्सा देखाउँने वेभसाइटले गौतम बुद्धको वास्तविक जन्मस्थान नेपालको लुम्बिनी भनेर देखाउँने गरेको छ ।
एउटा इन्टरनेट इन्साइक्लोपेडिया (wikipedia.org) मा लेखिएको छ, गौतम बुद्धको जन्म आज भन्दा करिब ३००० बर्ष पहिले तिलौराकोट (कपिलबस्तु) मा भएको थियो । उनको जन्म कपिलबस्तुका राजा शुद्धोदनको सुपुत्रको रुपमा भएको थियो । बर्षाैसम्म भएको उत्खनन, अध्ययन र खोजबाट पत्ता लागेको छ कि कपिलबस्तु नेपालको लुम्बिनीमा पर्दछ । यो कुरालाई नेपाल र भारतको सरकारका साथै युनेस्कोले पनि मान्यता दिएको छ । गौतम बुद्ध आफु २९ बर्षको हुञ्जेलसम्म कपिलबस्तुमा राजकुमार भएर बसेका थिए । उनको यसोधरासँग बिबाह भएको थियो र उनको राहुल नामको एउटा छोरो पनि थिए । संसारमा भएको दुख, बुढ्यौली र रोगको मुक्ति खोज्दै उनले कपिलबस्तु छोडे ।
तर सबै सन्दर्भहरुले यो सत्यलाई अंगालेको पाइदैन । भारतिय चलचित्रमा होस् या बिभिन्न वेभसाइट र सञ्चार माध्यममा अझै पनि गलत प्रचार कायम नै छ । यसको अतिरिक्त भारतिय पाठ्यपुस्तकमा समेत बुद्धको जन्मस्थान भारतमा हो भनेर लेखिएको छ ।
भारतले बनाउँन थालेको नक्कली कपिलबस्तु
यसलाई पुष्टि गर्न लुम्बिनीको २७ कि.मी. भारत तर्फ नक्कली कपिलबस्तु निर्माण गर्ने कार्य पनि निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ । यसको जरो यत्ति लामो छ कि यसबाट साधुसन्तहरु पनि अछुतो छैनन् । योग शिक्षा दिन नेपाल आएको समयमा भारतिय योगगुरु रामदेवले नेपाल टेक्ने बित्तिकै बुद्ध नेपालमै जन्मिएको र भारतको कुप्रचार निन्दनिय भएको बताए पनि उनको नियत केहि दिनमै प्रष्ट देखियो । उनीबाट लिखित एक पुस्तकमा गौतम बुद्ध जन्मिएको देशमा जन्मिन पाएकोमा गर्व लाग्छ भन्ने लेखिएको पाइयो ।
यसरी इतिहास र धार्मिक आस्था माथी नागों अपब्याख्या भइरहेको छ । बुद्ध नेपालको इतिहास हुन् र नेपालको पहिचान पनि । यसलाई विश्वमा स्थापित गर्न हामी नेपालीको लडाई जारी रहेको छ । फेसबुकमा होस् या बिभिन्न ब्लग बनाएर सत्यको पक्षमा सबैले आवाज बुलन्द बनाइरहे । असख्य पत्र र निवेदनका आधार तथा गुगलको अध्ययनले गौतम बुद्धको वास्तविक जन्मस्थान नेपालको लुम्बिनी नै भएको पुष्टि गरिदियो । नेपालीहरुको अथक प्रयास र योगदानले आखिरमा एक ठाउँमा भएपनि सत्यको जित भएको छ । यसबाट भारतको कुनियत धेरै हदसम्म पछारिएको छ । यो लडाईमा हरतरहले सहयोग गर्नेहरुलाई हार्दिक धन्यबाद र बधाई ।।।
Posted on April 17, 2010 by नेपाली मुटु
फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने www.tuexam.edu.np मा click गरेर हेनुहोस्, यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेभसाइट हो । तर जब click गरेर त्यसको पेज खोल्नुहुन्छ तब तपाईलाई लाग्छ, साँच्चै त्रि.वि. पुरानो रहेछ । पुरानो भएर अब त बुढो पनि भएछ ।
बुढो हुनुको अर्थ हो, आफ्नो अङ्गहरु राम्ररी नचल्नु, घटिरहेका घटनाहरुसँग सँगै चल्न नसक्नु र यसको परिणति हो आफु भन्दा कान्छाहरुसँगको दौडमा धेरै पछि पर्नु । यी सबै बिशेषता बुढेशकालका हुन् भन्ने तपाई मान्नुहुन्छ भने यो पनि मान्न करै लाग्छ कि त्रि.वि. साँच्चै नै बुढो भएको छ । यसको सबुद प्रमाणको रुपमा तपाई भेट्न सक्नुहुन्छ त्रि.वि.को वेभसाइटलाई ।
वेभसाइटको सुरुमै देखिन्छ, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कर्तव्यको विवरण । र, साथै लेखिएको छ, यसले २५० भन्दा बढि क्याम्पस र चार लाख बिद्यार्थीहरुका विभिन्न कामहरु गर्दछ । साथै २७११ भन्दा बढि बिषयको परिक्षा लिनु पनि यसको दायित्व हो । यसका लागि यसमा दुइसय भन्दा बढि कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । यसमा ताजा परिक्षाको नतिजा भनेर प्रविणता तर्फ २०६६ कार्तिक २९ को परिक्षाफल र स्नातकोत्तरमा एम्.ए. साइकोलोजीको २०६६ माघ २० को परिक्षाफल राखिएको छ । सुचनापेजमा सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुलाई ट्रान्स्क्रिप्टका लागि जमल स्थित कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ । तर जमलमा अहिले त्रि.वि.को कार्यालय छैन । अझ हास्यास्पद कुरा त यो छ कि तपाई २०७५ सालको परिक्षाफल अग्रिमरुपमा त्रि.वि.को वेभसाइटमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो । योजना आयोगका कर्मचारी देखि लिएर नेता तथा अन्य प्रायः सम्पुर्ण कर्मचारीहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उत्पादनहरु हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै शिक्षा पाएर सबैले आफ्नो जिवन सुधारेका छन् तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफु दिनानुदिन जिर्ण बन्दै गइरहेको छ । यसको जिम्मेदारी कसैले लिन चाहिरहेका छैनन् । आखिर कहिले सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसरी बाँचिरहन सक्छ ? शिक्षालयहरुको बुढ्यौलीले सभ्यतालाई अपागं बनाउँछ भन्ने हामीले कसरी बिर्षन सक्यौं ?